कस्तो अचम्म ? महिलासँग यौन सम्बन्ध राख्नु परेमा २४ घण्टा अघि प्रहरीलाई जानकारी दिनुपर्ने - Kohalpur Trends
कस्तो अचम्म ? महिलासँग यौन सम्बन्ध राख्नु परेमा २४ घण्टा अघि प्रहरीलाई जानकारी दिनुपर्ने
काठमाण्डौ । संसारको कुनैपनि देशमा श्रीमान र श्रीमतीलाई एकअर्कासंग यौन सम्पर्क राख्ने अधिकार कानूनी रुपमा नै दिईएको छ । तर बेलायतको एक अदालतले एउटा युवालाई शारीरक सम्बन्धको विषयमा भने सुन्दा अचम्म लाग्ने निर्णय सुनाएको छ । ती युवकलाई कुनै महिलासँग यौन सम्बन्ध स्थापित गर्नु २४ घण्टा अघि प्रहरी र महिला दुबैलाई यसबारे जानकारी दिनुपर्ने आदेश दिइएको छ ।
साथै युवकलाई कुनै पनि महिलासँग अनावश्यक कुराकानीमा पनि रोक लगाइएको छ । ३९ वर्षका पुरुष डीन डायरमाथि यौन हमलाका विभिन्न विषयमा मुद्दा चलिरहेको छ । एक महिलाले ती पुरुषमाथि पार्टीका बेला गलत तरिकाले छोएको र यसको विरोध गर्दा बलात्कारको धम्की पनि दिएको आरोप लगाएकी छिन् । यद्यपि, उनीमाथि लागेका कुनै पनि आरोप पुष्टि भइसकेको छैन ।
Previous Previous post: बाँकेमा बन्दको प्रभाव, चलेनन् सार्वजनिक सवारी, पसल आंशिक खुला
Next Next post: कस्तो अचम्म ? महिलासँग यौ’न सम्बन्ध राख्नु परेमा २४ घण्टा अघि प्रहरीलाई जानकारी दिनुपर्ने